मतदाताले सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने कानुन बन्दै – Online National Network
२५ असार २०७४, आईतवार ०२:३५
काठमाडौं, २५ असार – निर्वाचनमा मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिन पाइने कानुनी व्यवस्था त अहिले नै छ । तर, कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन भने के गर्ने ? कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्नेले पनि अब घरमै बस्नुपर्दैन, मतदान केन्द्रमा गएर कुनै पनि उम्मेदवार ठीक छैनन्, कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्न पाइने कानुनी व्यवस्था नेपालमा पनि हुन लागेको छ ।
VOTE NO red Rubber Stamp overawhite background.
विधेयकको दफा ७५ मा सबै उम्मेदवार वा दललाई मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले विधेयक गृह मन्त्रालय पठाइसकेको छ । आयोगसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि संसद्मा पुग्नेछ ।
निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका दल वा उम्मेदवारलाई भन्दा कसैलाई पनि मत दिन्नँ (नन अफ द एभोब) मा मत धेरै भएमा के गर्ने ? प्रश्न यो पनि छ । यो विषयमा निर्वाचन आयोगभित्र छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । तत्कालीन कामु प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले उम्मेदवारको भन्दा ‘नन अफ द एभोव’ मा मत धेरै भए दोस्रो चरण पनि निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । दोस्रोपटक भन्दा बढी भने निर्वाचन नगर्ने गरी ऐनमा उल्लेख गर्ने तयारी भएको थियो । तर, अहिले यसबारे आयोगले प्रस्ट केही बताएको छैन । आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलका अनुसार संसद्बाट सो व्यवस्थासहित ऐन पारित भएमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । ‘उम्मेदवारको भन्दा बढी मत नन अफ द एभोवमा आउँदैन भन्ने आयोगको विश्लेषण छ ।
मतदाताले दल र उम्मेदवार अस्वीकृत गर्न पाउँछन्-नीलकण्ठ उप्रेती
नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्दा कुनै पनि उम्मेदवार र दल चित्त नबुझे सबैलाई अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था पनि हुन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग भन्न सकिन्छ । अर्थात् मतदाताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवार छान्न वा नछान्न पनि पाउँछन् । उम्मेदवारहरूको राजनीतिक, नीतिगत, आर्थिक र नैतिक आचरण कमजोर छ भन्ने लागेमा ‘नन अफ द एभोब’ (कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्ने) विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ ।- नयाँ पत्रिका दैनिक